विद्युत् प्राधिकरणको ठगी ! - UrjaKhabar विद्युत् प्राधिकरणको ठगी ! - UrjaKhabar
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लकडाउनको कारण नियमित मिटर हेर्न आएन । त्यसकारण, बिजुली महसुल बुझाउन सकिएन । सरकारले यो समयको जरिवाना नलिनको लागि निर्देश दियो । निश्चित युनिटसम्म उपभोग गर्नेलाई केही छुटको पनि व्यवस्था गरेको थियो ।
नियमित मिटर रिडिङ गर्ने मितिको एक हप्तासम्म महसुल बुझाउनेलाई प्रोत्साहन स्वरूप २ प्रतिशत छुट थियो । पहिले त्यो ३ प्रतिशत थियो । छुट लिने (समयमा महसुल बुझाउने) को संख्या बढी भएपछि घटाएर २ प्रतिशतमा झारेको हो ।
मकहाँ मिटर पढ्न नआएको ३ महिना हुन लागिसकेको थियो । लकडाउनले गर्दा चैतको पनि बाँकी नै थियो । हिजाे यत्तिकै अनलाइन अपडेट हेरेको त चैत र बैशाखको महसुल भनेर फागुनमा जति तिरेको छ, त्यति नै राखेको रहेछ।
अनलाइन तिर्न मिल्ने हुँदा दुई प्रतिशत छुटको सुविधा लिन पाइएको थियो। पहिले पनि सकेसम्म तोकिएको पहिलो हप्तामै तिर्ने गरिन्थ्यो। लकडाउनको कारण प्राधिकरणले समयमा मिटर नपढेको र बिल अपडेट नगरिदिएकोले समयमा महसुल बुझाउन सकिएन । तर, अहिले नियमित दिँदै आएको २ प्रतिशत छुट प्राप्त हुन सकेन ।
न्यूनतम युनिट उपभोग गर्नेलाई सरकारले दिएको छुट कसरी दिइयो थाहा भएन। तर तोकिएको समयमा प्राधिकरणकै कारण तिर्न नपाएको महशुलमा उनीहरूले नै तोकेको छुट नदिनु भनेको ठगी हो कि लुट हो ? फोनमा सोध्दा “हामीलाई यस्तै आदेश छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ” बाहेक कुनै जवाफ पाइन्न ।
कसलाई भन्ने त भन्दा त्यो पनि थाहा छैन रे ! छुट भनेको जरिवाना नलिएको रे ! त्यो कसले गर्दा ? उपभोक्ताको कारण हो ? हो यसकारण मलाई नेपालमा हुने हरेक गतिविधिको कहिल्यै विश्वास लाग्दैन । यहाँ ठगी गर्न नियम चाहिन्न तर आफैंले बनाएको नियमको निर्वाह गर्न चाहीँ अर्को नियम चाहिन्छ।